ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေဒီယိုသတင်းများမှ ဘင်္ဂလီတစ်ဦးလျှင် မြန်မာ ဆယ်ဦးနှုန်း အသက်သွေးကြွေးပေးဆပ်ရမည် ဟုကြေငြာ။ | မျိုးမြန်မာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေဒီယိုသတင်းများမှ ဘင်္ဂလီတစ်ဦးလျှင် မြန်မာ ဆယ်ဦးနှုန်း အသက်သွေးကြွေးပေးဆပ်ရမည် ဟုကြေငြာ။
Posted in: သတင်း.	Tagged: စစ်ပွဲ, ဘင်္ဂလာဒေရ်, မြန်မာ ကုလား စစ်ပွဲ.	Leaveacomment
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တပ်များအားလုံး အမြင့်ဆုံးသောအခြေအနေအထိ အရေးပေါ်တပ်လှန့်ထားရှိပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလွှတ်တော်မှ မြန်မာနိုင်ငံအား တရားဝင် စစ်ကြေငြာလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် သေချာမှုရှိအောင် မေးမြန်းရာ – အောက်ပါအချက်အလက်များသည် အတည်အဖြစ်သိရှိရပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် တပ်များအားလုံးကို အရေးပေါ်အခြေအနေသို့ တပ်လှန့်ထားရှိပြီး မြန်မာပိုင် အုန်းကျွန်းအနီး (၃) ဖာလုံခန့်အကွာတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ်မှ ဖရီးဂိတ်များ နှင့် ဖျက်သင်္ဘောများ (၅) စီး လာရောက်တပ်စွဲထားသည်။ မြန်မာဖက်မှလည်း အုန်းကျွန်းအနီးတွင် ရေတပ်သင်္ဘော (၅)စီး ထိပ်ဆိုင်၍ တပ်ချထားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ကြေးတပ် အင်အား (၅၀၀၀)ခန့် နယ်စပ်တွင် ၀င်ရောက်နေရာယူထားပြီး မြန်မာဖက်မှ အင်အား (၉၀၀၀) ခန့် ၀င်ရောက်နေရာယူထားသည်။
ဘင်္ဂလီ ရေဒီယိုသတင်းများအားလုံးကို ဘာသာပြန်များဖြင့် နားထောင်နေပြီး၊ မြန်မာ့ရေတပ်မတော် အုပ်စုတစ်စု နယ်စပ်သို့ဦးတည်ထွက်ခွာလာနေကြောင်း၊ မိတ္ထီလာ လေတပ်စခန်းအားလည်း အမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့တပ်လှန့်ထားကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
← ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အငြင်းပွားမှု